Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo ka hor-yimid Ruqsad-siinta Shirkadaha Isgaarsiinta - Jowhar Somali news Leader
Home News Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo ka hor-yimid Ruqsad-siinta Shirkadaha Isgaarsiinta
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka hor-yimid warqad uu soo saaray Maareeyaha Hey’adda Isgaarsiinta Qaranka oo ahaa in Shirkadaha Isgaarsiinta dalka ay qaataan Ruqsadaha Isgaarsiinta.
Qoraal ka soo baxday Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta, laguna socodsiiyay Shirkadaha isgaarsiinta Hormuud, Somtel, Golis, Telsom iyo Amtel ayaa lagu sheegay in rukhsadaha uu soo saaray Maareeyaha aysan waafaqsaneyn sharciga Isgaarsiinta oo aysan ku dhaqmi karin Shirkadaha.
Wasiirka ayaa sheegay in in arrintan looga doodi doono kulanka ay soo qaban qaabisay WBI&T ee ay isugu imaanayaan Shirkadaha Isgaarsiinta, Hey’adda Isgaarsiinta Qaranka, Garyaqaanka Guud ee Qaranka iyo WBI&T. kaasoo Muqdisho ka dhici doona 15-ka illaa 16-ka bishan June 2020.
Hey’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa ah Hey’ad u madax banaan fulinta howlaha loo igmaday oo ay ku bixin karto ogolaanshaha ruqsadaha sida uu dhigayo qodobka 7aad ee Sharciga Hey’adda Isgaarsiinta Qaranka.
Ilo ku dhow dhow Maareeyaha Hey’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in Maareeyuhu aaminsan yahay inay howshiisa tahay bixinta ogolaanshaha ruqsadaha, isla markaana aanu wasiirka shaqo ku laheyn, sidoo kale waxaa la sheegayaa in wadatashiga ay Wasaaradda ku laheyd warqadaas la marsiiyay, laguna ogeysiiyay.
Inta badan shirkadaha Isgaarsiinta ayaa u hoggaansamay Warqadii ka soo baxday Maareeyaha, iyagoo shubay lacagtii laga rabay ee ogolaanshaha ruqsaddaha shaqo
Halkan hoose ka akhriso Warqadii wasiirka:-